Indlu Yamaplanga Enendawo Yokubona - I-Airbnb
Indlu Yamaplanga Enendawo Yokubona
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguLesley
Indlu yamaplanga enamagumbi aliqela ekumgama wokuba ungahamba ngeenyawo ukuya kuzo zonke izinto ezinokusetyenziswa ekuhlaleni (ipuli yokuqubha, iivenkile, iivenkile zokutyela neebhari). Iphantse ibe yimizuzu eyi-10 xa uhamba ngebhasi ukuya kwindawo ekufutshane nesikhululo setreyini sasekuhlaleni. Ilungiselelwe kakuhle ukuhlola iinduli neentaba. Ibhulorho eya kwi-Isle of Skye ikumgama weemayile eziyi-1 kuphela kwaye iinduli zaseKintail zikufutshane neekhilomitha eziyi-15.
Idolophana engaqhelekanga nebukekayo yasePlockton ikufutshane ne-Eilean Donan Castle enembali ekumgama weemayile eziyi-8.
Indlu yamaplanga inegumbi lokulala eliyi-1 elikhulu kunye negumbi leshawa elinomnyango ophumela ngaphandle. Ikwanendawo evulekileyo yokuceba ikhitshi lokuhlala elineminyango yeglasi ephindwe kabini nenembonakalo entle ye-Isle of Skye, i-Isle of Rassay kunye nokuya e-Isle of Rona
4.99 · Izimvo eziyi-72
Yindawo entle ethe cwaka kwiiskeyiti eziphandle zaseKyle kwindlela eya ePlockton.
Umbuki zindwendwe ngu- Lesley
Iindwendwe ziza kukwazi ukudibana nam ebudeni bexesha eziza kulihlala. Njengoko indlu yamaplanga ime kumabala egadi yethu emva kwendlu yethu siyakwazi ukunceda okanye ukucebisa xa kuyimfuneko. Bobabini sisebenza emini kodwa siza kufumaneka ukususela ngokuhlwa.
Iindwendwe ziza kukwazi ukudibana nam ebudeni bexesha eziza kulihlala. Njengoko indlu yamaplanga ime kumabala egadi yethu emva kwendlu yethu siyakwazi ukunceda okanye ukucebisa xa…